राष्ट्र बैंकले खरानी बनायो पाँच खर्बका नोट ! कसरी नष्ट गरिन्छ थोत्रा नोट ? - Online Khabar
जेष्ठ १२,२०७७ / ०९ : १७
राष्ट्र बैंकले खरानी बनायो पाँच खर्बका नोट ! कसरी नष्ट गरिन्छ थोत्रा नोट ?
Online Khabar 2076-6-22
२२ असोज, काठमाडौं । दशैंमा टीका लगाएर नयाँ नोट दक्षिणा दिने चलन छ । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक वर्षको दशैंमा नयाँ नोट निकाल्छ । तर, नोटहरुको जतन नहुँदा राज्यले ठूलो आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्ने गरेको छ ।